हामी यसरी अगाडी बड्ने छौ , अब !
हामी युवाहरुले `सल्यान गेट´ निर्माणको निम्ती गरेको सहकार्यको अपिल र आग्रहलाई उहाँहरुले (जसले गेट बनाउछौ भनेर सरकारी बजेट छुट्याउनु भएको छ) खासै चासो नदिएको पाइयो । उहाहरु धेरै अगाडी बढीसक्नु भएको रहेछ पनि । बजेट छुट्टयाउनुका साथै उहाहरु गेट बनाउन भनेर गेट निर्माण उपोभोक्ता समिती समेत बनाएर उहाहरु आफ्नै पारामा अगाडी बढ्दै हुनुहुन्छ ।
हामीले गरेको सहकार्यको आग्रहलाई ' हामी सबैले छलफल गरेर जबाफ दिन्छौ ' भनेर टाली मात्रै दिनु भयो । त्यो सबैको छलफलको निष्कर्ष के भयो हामीलाई अहीलेसम्म बताइएको छैन । हामी कुरेको कुरेइ हुने अनि उहाँहरु चाहिँ गेट निर्माणमा अगाडि बढ्ने पनि त राम्रो हुदैन नि । यसर्थ हामीहरुले पनि अब गेट निर्माण कार्य यथासिघ्र बढाउदै छौ ।
२/२ वटा गेट किन चाहियो - सबैको मनमा लाग्न सक्छ । हो अब सल्यानमा बने भने २ वटै गेट बन्ने छन । किनकि न उहाँहरु हामीसंग मिल्न राजी हुनुहुन्छ न हामी युवाहरु यो अभियानबाट भाग्न नै चाहन्छौ । उहाँहरुले कपुरकोटमा गेट बनाउनको निम्ति रकम बिनियोजन गर्नु भएको हो । तर हामीले बनाउने गेट दाङ - सल्यान सिमानामा हो । कपुरकोट आफैमा एउटा टुरिजम हट्स्प्ट भएकोले त्यहा गेट बन्दा कपुरकोट बजारको गरीमा बढ्ने निस्चित छ । यसकारण उहाँहरुले कपुरकोटमा बनाउन लागको सल्यान गेट सभ्य र भव्य बनोस - शुभकामना ! तपाईहरुले बनाएको गेटले राजनिती छनक नदिइ नितान्त सल्यानको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्ने गेट बन्न सकोस - एक सल्यानी युवाको चाहना + आशा !!
समग्र जिल्लाको गरिमा बोकेको सल्यान प्रबेशद्वार अब युवाहरुले सिमानामा बनाउने छौ । जिल्लाको सिमाना सुरु हुने बिन्दुमा सल्यान प्रबेशद्वार बन्दा सल्यानको सिमाना पनि प्रष्ट हुने र जिल्लामा आउने जति सबैलाई सल्यान प्रती सकारात्मक भावना पैदा गराउन एउटा अलग्गै भुमिका खेल्नेमा दुईमत छैन । हामी ३ महिना पछिबाट गेट निर्माण अभियान थाल्ने छौ । हामीसंग रकमको अभाव हुन सक्ला तर हामीहरुसंग आट र इक्छ्याको कहिले अभाब हुने छैन । हामी युवाहरु जिल्लाको लागि गेट बनाउन श्रमदान गरेर लेबर कस्ट बचाएर पनि गेट निर्माण गरेर छोड्ने छौ ।
हो सिमानामा बिबाद छ , सिमानाको भौगोलिक अबस्था पनि सहज छैन । बनाउन अत्यन्त कठिन हुने देखिन्छ । तर सबै सल्यानी युवाहरुले यो कुरा स्मरण गर्न आबश्यक छ कि हाम्रा बुवाबाजेहरुले आफ्नो युवाअबस्थामा सल्यानको खलंगामा लुहापिङ फिल्ड बनाएका थिए । कल्पनै गर्न नसकिने एउटा पहाडलाई कुटो र कोदालीका भरमा एउटा डाडोलाई सम्म्याएर विशाल मैदान बनाएको हाम्रो पुर्खाको ईतिहास हो । हामीहरुले अहिले मोटर कुदाउने मोटर बाटाहरु पनि हाम्रा पुर्खाहरुले नै ब्याल्च्या र कोदालीका भरमा खनेका थिए । त्यो जमानामा पनि हाम्रा पुर्खाहरुले त्यति धेरै प्रेरणायोग्य कार्यहरुको गर्दिनु भयो जसको लाभ अहिले हाम्रो पुस्ताले लिइरहेको छौ । हामी त यतीबेआ प्रबिधीको युगमा छौ । इक्छ्या शक्ति मात्रै राखौ न हामीले हाम्रो सल्यानलाई नमुना जिल्लाको रुपमा बिकास गर्न अबस्य सक्छौ नि हैन र ?
हामीले समस्त सल्यानी युवाहरुले जिल्लाको लागि केही योगदान दिऔ भनी सल्यान गेट निर्माण गर्ने योजना ल्याएका छौ । २५ लाख रुपैया संकलन गरेर सल्यानकै शानको रुपमा गेट निर्माण गर्ने चुनौती पनि मोलेका छौ। सल्यानलाई अगाडी बढ़ाऊँने ज़िम्मेवारी युवाहरूको भएकोले सम्पूर्ण युवाहरू सल्यानको लागी सकृय भूमिकामा ल्याउन यो गेटले सकारात्मक सन्देश प्रबाह गर्ने छ भन्ने पुर्ण विश्वाश लिएका छौ । र समस्त सल्यानी महानुभावहरुको साथ र सहयोग संगै समस्त सल्यानी युवाहरुलाई यस अभियानमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर अभियान्ता बनी समृद्ध सल्यानको निर्माण यात्रामा लाग्न अपिल गर्दछौ ।
संयोजक , सल्यान गेट निर्माण अभियान
Unknown 24 April 2017 at 07:12